Inona Marina ny Halloween?
FANTARO IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY Firaisana Alohan’ny Fanambadiana
MATOAN-DAHATSORATRA Inona Marina ny Halloween?
HO AN’NY FIANAKAVIANA Mahaiza Mifamela
FANADINADINANA Miresaka ny Finoany Ilay Manam-pahaizana Momba ny Voa
FIANARANA AVY TAMIN’NY LASA Zheng He
NISY NAMORONA VE? Ny Volon’ny Vorondrano
I Josefa Tany Ejipta
Mifohaza! | Septambra 2013
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Xhosa Zoloa Éwé
Mahafantatra olona mankalaza Halloween ve ianao? Fety malaza be any Etazonia sy Kanada izy io, ary atao isaky ny 31 Oktobra. Misy fety sahala amin’izy io anefa ataon’ny olona eran-tany. Ny anarany fotsiny no samy hafa, fa izy rehetra samy misy resaka fanahin’ny maty, na matoatoa, na mpamosavy, na devoly sy anjely ratsy mihitsy.—Jereo ilay hoe “Fety Mitovy Amin’ny Halloween.”
BETSAKA amin’ireo mankalaza Halloween sy fety mitovitovy aminy no tsy tena mino ny matoatoa na angatra. Mba te hifety fotsiny izy ireo sady tiany koa ny zanany haka sary an-tsaina zavatra isan-karazany. Misy koa anefa no mino fa ratsy ireny fety ireny. Nahoana?
Hoy ny rakipahalalana iray: “Ny tena tanjon’ny Halloween dia ny hifandraisana amin’ny fanahin’ny maty sy herin’ny maizina ary fanahy ratsy mampitahotra na mety hanisy ratsy.” (Jereo ilay hoe “Ny Tantaran’ny Halloween.”) Ireo fety mitovitovy amin’ny Halloween koa samy avy amin’ny fanompoan-tsampy sy fivavahana amin’ny razana. Olona maro eran-tany no mbola miezaka mifandray amin’ny maty, rehefa amin’ireny fotoana ireny.
Fety amerikanina no tena ahafantarana ny Halloween, nefa mihamaro foana isan-taona no lasa mankalaza azy io. Tsy fantatr’izy ireny anefa fa avy amin’ny fanompoan-tsampy ny fombafomba sy zavatra ampiasaina amin’ny Halloween. Tsy azony an-tsaina koa fa misy resaka herin’ny maizina sy matoatoa na fanahy ratsy ilay izy.—Jereo ilay hoe “Ahoana no Niandohany?”
Nankalaza ny fetin’ny maty ny Selta fahiny (mponina tany Irlandy sy ny manodidina). Antsoina hoe Samain ilay izy, ary io no niavian’ny Halloween. Mbola manao azy io ny Wicca, fivavahana mpanompo sampy. Alina masina indrindra io amin-dry zareo ary mbola antsoiny hoe Samain. Hoy ny mpisikidy iray ao amin’ny Wicca, tao amin’ny gazety Etazonia Ankehitriny (anglisy): ‘Mankalaza ny fetinay ny Kristianina, fa ry zareo fotsiny no tsy tonga saina. Vao mainka tianay koa izany.’
Mifanohitra amin’ny Baiboly ny fety toy ny Halloween. Izao mantsy no voalaza ao: ‘Aoka tsy hisy eo aminao ny olona manao sikidy, na mampiasa herin’ny maizina, na mpilalao ody, na olona mankany amin’ny mpamoha angatra, na olona manontany amin’ny maty.’—Deoteronomia 18:10, 11; jereo koa ny Levitikosy 19:31; Galatianina 5:19-21.
Araka izany àry, dia avy amin’ny fanompoan-tsampy ny Halloween sy ny fety mitovitovy aminy. Tsy ilaina fantarina ve izany, hoy ianao? Raha azonao tsara mantsy ilay izy, dia na ianao aza mety hiombon-kevitra amin’ireo tsy mankalaza azy io.
‘Mankalaza ny fetinay ny Kristianina, fa ry zareo fotsiny no tsy tonga saina. Vao mainka tianay koa izany.’—Tenin’ny mpisikidy iray, tao amin’ny gazety Etazonia Ankehitriny
FETY MITOVY AMIN’NY HALLOWEEN
Any Amerika no tena malaza ny Halloween. Efa mihamaro anefa izao no manao azy io eran-tany. Fety maro koa no mitovitovy amin’izy io satria misy resaka fanahy sy herin’ny maizina. Anisan’izany ireto:
Amerika Avaratra - Fetin’ny Maty
Amerika Atsimo - Kawsasqanchis (mampisakafo an’ireo maty)
Eoropa - Fetin’ny Maty sy fety mitovy amin’ny Halloween
Afrika - Dihin’ny Egungun Misaron-doha (dihy iantsoana fanahy)
Azia - Fety O-bon (misy dihy ho an’ny maty)
AHOANA NO NIANDOHANY?
Ny Nahatonga ny Fanao sy Zavatra Sasany Amin’ny Halloween
VATOMAMY: Nomen’ny Selta zava-mamy ireo fanahy ratsy mba tsy ho tezitra. Tatỳ aoriana koa, dia nampirisika ny mpiangona ny Fivavahana Milaza Azy ho Kristianina mba hitety trano ny alina alohan’ny Fetin’ny Maty, ka hivavaka ho an’ny maty ary hangataka vatomamy na zavatra hafa avy eo. Lasa fanao amin’ny Halloween ilay mangataka vatomamy.
AKANJO SY SARON-TAVA: Nanao saron-tava mampahatahotra ny Selta fahiny. Amin’izay, hono, ny matoatoa tsy mampijaly azy ireo satria mihevitra hoe fanahy koa ry zareo. Nanao akanjona olo-masina na anjely na devoly koa ny Kristianina sasany tatỳ aoriana sady nitety trano. Naka tahaka ny fanaon’ny mpanompo sampy mantsy ny Fivavahana Milaza Azy ho Kristianina rehefa nankalaza Fetin’ny Maty sy Fetin’ny Olo-masina.
VOATAVO: Tsy voatavo fa nave no nampiasaina taloha. Noloahana ilay izy, dia nasiana labozia nirehitra mba handroahana ny fanahy ratsy. Nisy koa nihevitra fa toy ny fanahy ao amin’ny afofandiovana ilay labozia ao anaty nave. Voatavo indray no be mpampiasa tatỳ aoriana.
VAMPIRA, MPAMOSAVY, LOLOVOKATRA: Efa hatramin’izay mihitsy ny olona no mieritreritra fanahy ratsy sy herin’ny maizina, raha vao ireo no resahina.
NY TANTARAN’NY HALLOWEEN
TAONJATO FAHADIMY TALOHAN’I KRISTY
Nankalaza ny Samain ny Selta fahiny rehefa faran’ny volana Oktobra, satria noheverin’izy ireo fa amin’io no tena mihelohelo etỳ an-tany ny angatra sy ny demony.
TAONJATO VOALOHANY AORIAN’I KRISTY
Nanjanaka ny Selta ny Romanina ka lasa nankalaza ny Samain koa.
Voalaza fa namorona ny Fetin’ny Olo-masina Rehetra ny Papa Boniface IV, mba hanomezam-boninahitra an’ireo maritiora. Lasa nankalazaina isan-taona izy io. *
Natokana hahatsiarovana ny maty ny 2 Novambra, ary nantsoina hoe Fetin’ny Maty.
Nivoaka tamin’ny boky sy gazety amin’izay ilay anarana hoe Halloween fa tsy natao intsony hoe Hallowe’en na Hallow Evening, midika hoe “Alin’ny Olo-masina.”
Olona an’arivony avy any Irlandy no nifindra tany Etazonia, ka nitondra an’ireo fanao amin’ny Halloween. Nifangaro tamin’ny fanaon’ny mpifindra monina avy tany an-tany hafa koa anefa ilay izy, anisan’izany ny avy tany Grande-Bretagne sy Alemaina ary Afrika.
Lasa fety nalaza eran’i Etazonia ny Halloween.
Tafakatra ho an’arivony tapitrisa dolara ny tombony azon’ny mpivarotra eran-tany, noho ny Halloween.
^ feh. 37 Midika hoe “olo-masina” ny hoe hallow, ka nantsoina hoe All Hallow’s Day ny Fetin’ny Olo-masina Rehetra. Ny alina talohan’io fety io no natao hoe All Hallow Even, ka lasa hoe Halloween rehefa nohafohezina.
Tokony Hankalaza Fety ve Isika?
Ahoana no niandohan’ireo fety be mpitia fanaon’ny olona any aminareo? Jereo ato izany dia ho gaga ianao.
Septambra 2013 | Inona Marina ny Halloween?
MIFOHAZA! Septambra 2013 | Inona Marina ny Halloween?
Ahoana no Fiheveran’ny Baiboly ny Halloween?